ifenisha Convertible eminyakeni yamuva isezingeni eliphakeme ukuthandwa. Lokhu kungenxa, usayizi ngokuyinhloko, kunalokho encane ezindlini kakhulu ezisemadolobheni, kanti eyesibili - indlela esiwusizo nempikiswano ukuthenga ifenisha, ikakhulukazi uma kumayelana nengane. Baby embhedeni transformer abakwazi kuphela wonge isikhala ekamelweni, kodwa bayakhohlwa ukuthenga embhedeni izingane ezincane. abakhiqizi Wezingane ifenisha ukunikela anhlobonhlobo onobuhle, okuzokwenza ayahluka ngobukhulu ngekukhula ingane.
Wezingane embhedeni-transformer ngoba ingane obelokhu izintandokazi zabo futhi imibono ngalokho afuna, uma kungenzeka kumele ithengwe ngokuhambisana nezifiso zakhe. Abazali lapho ukhetha indlwana for ingane eyeve eshumini nambili ngamakhasimende ngokuyinhloko ithuba uwubhala kahle futhi ngokuvumelanayo esikhaleni wekamelo yezingane, kodwa musa njalo bacabanga ukuthi kuyoba ukhululekile ingane. Ikakhulukazi uma unezingane ezimbili, futhi izingane zidinga a Convertible embhedeni embhedeni. ifenisha ezinjalo, ngendlela, uvezwa ezihlukahlukene.
Omunye khetho iyunithi umbhede okwesikhathi ingane zingakhiqiza zezingane embhedeni-transformer ngesimo encane aguqulayo kusofa. Lapho behlangene, ngeke enze umsebenzi usofa yezivakashi, iqhume ukukhonza embhedeni ivulekile ngu pads ekhethekile, okuyizinto ezinwetshiwe kumatilasi. Ngo sobuhle bayo yayo izingane ezinjalo embhedeni-transformer ungakwazi ukudlula wonke amathemba. Lokhu samuntu kuyahluka obukhulu, compactness futhi Ukusebenziseka.
Baby embhedeni transformer kuhlangene edeskini umsebenzi - a "igama elisha" emsebenzini wokukhiqiza ifenisha zezingane intsha. manipulations Simple uvumele okuguqula embhedeni etafuleni yokusebenza, okuyinto usindisa Igumbi isikhala sengane hhayi kuphela, kodwa futhi nokuba ngifundise ingane oda. Lapha kakade, kungakhathaliseki ukuthi izifiso, kuyodingeka wenze ngokugcwalisa embhedeni ukuya ezifundweni ideskithophu. Ukutholakala zangaphansi ukuvumela ukugcina izinto endaweni eyodwa bese ugcine igumbi kusukela lesi sifo ngesimo amathoyizi ehlakazekile nezinto esikoleni. Inzuzo eyengeziwe yale indlwana kuyinto ukubukeka kwayo kucocekile.
Emndenini omkhulu futhi, akukho kungenzeka ukwaba ukuze ngabanye bengane ngayinye isikhala siqu embhedeni izingane - amabili transformer, noma ngisho ezintathu abaphuma - Liyoba yini ikhambi ekahle udaba iyunithi imibhede izingane. izinto Modern uvumele ukwenza lula, kodwa ngesikhathi esifanayo design ngokwanele. Ngo sisikhulu namuhla embhedeni iziponji. Ngokuthenga lokhu imodeli, akufanele wethembe isicelo yokuthengisa umsizi ukuthi uqimba phezulu ongamelana omdala yasekhaleni + enesisindo esiyingxenye amakhilogremu engamakhulu, kungcono uqiniseke ngakho mathupha kokuhlola isitifiketi izinga.
Ukuhlala mojuli: sebenzisa isikhala max
Esinanyathiselwe ekhoneni emashalofini - zikanokusho ukhululekile
Uyini ukusebenza Windows XP?
I-Vero Moda - uphawu lwesiDanishi, ilungiselelwe impilo yansuku zonke